के जीवन बिताउन श्रीमान् नै चाहिन्छ त ? – Online Khabar 24
September 16, 2021 by admin admin
पुरा खबर अघि यो माथि follow गर्दिनुस,
जीवन विताउनका लागि श्रीमान् वा श्रीमती नै चाहिन्छ त ? दाम्पत्य जीवन विताउनै पर्छ त ? यसमा एउटा ठूलो जमातले सहमतिको टाउको हल्लाउन सक्छन् ।
याे पनि, घरमै बनाउनुहाेस् खाउँ खाउँ लाग्ने स्वादिलो आँपको अचार,यस्ताे छ बनाउने तरिका । सर्वप्रथम काँचो आँपलाई पखाल्नुहोस् र बोक्रा निकालेर ठिक्क आकारमा का-ट्-नुहोस् । अब यसरी का-टिए-को टुक्राहरुलाई नून र बेसारमा मोल्नुहोस् र एउटा सिसाको भाँडामा राख्नुहोस् ।
त्यसपछि सिसाको भाँडालाई तीन दिनसम्म घाममा सुकाउनुहोस् र प्रत्येक दिन सफा चम्चाले चलाउनुहोस् । तीन दिन पछि अचारमा आवश्यकता अनुसार हीं-ग र रातो खुर्सानीको धूलो मिसाउनुहोस् । त्यसपछि एउटा भाँडोमा तोरीको तेल तताउनुहोस् र चोसो भएपछि अचारमा मिसाउनुहोस् । अब अचार तयार भयो ।
Prev२२ रुपैयाँमा छानी-छानी ग’र्लफ्रेण्ड !
next६ जनाको सामूहिक ह’ त्या भएको घ’टनामा एक्कासी अर्को मोड ! अर्को एक जना पनि प्रहरी नि’यन्त्रणमा